Akany Avoko Ambohidratrimo 25 taona nitantana azy ny tale Andriandanja Nina
Feno 25 taona ny nitantanan’ny tale Andriandanja Lalasoa Maminirina na i Nina ny Akany Avoko Ambohidratrimo. Akany fanarenana
nandraisana ny zaza tsy ampy taona voafonja izy tany aloha nefa voavadika ho akany fanabeazana ireo ankizy tandindomin-doza ankehitriny. Ny fitsarana ihany no mandefa ny ankizy ao. Misy niharan’ny herisetra isan-karazany, kamboty tsy misy mpiahy na narian’olona, ankoatra ireo ankizy tsy ampy taona voaheloky ny fitsarana. Nisedra olana ara-bola hatramin’ny nampiatoan'ny fanjakana ny sara-pandraisana anjara ankizy 1000ar isam-bolana nanomboka ny 2001 nefa tafarin'ny tale ka mahazaka tena
70% ankehitriny. Assistantes sociales roa avy any Soisa izay niasa
tanaty fonja malagasy no nangataka toerana hanorenana akany
hametrahana ireo zaza tsy ampy taona aty ivelan’ny fonja
tamin’ny alalan’ny fiangonana LMS. An'ny FFPM ny toerana ka nisy
fotoam-pivavahana notarihin'ny filoha FFPM, Pr Irako Ami tamin’ny
alahady ho fanokafana. Efa 55 taona no nisian'ny akany ary namoaka
olom-banona maro izay efa lasa mpandraharaha eto an-toerana sy any
ivelany, mpiasam-panjakana ambony izay tsy manadino fa manampy ny akany ihany koa rehefa tafavoaka. 45 ny ankizy notaizaina tamin’ny nandraisan’i Nina ny akany tamin’ny 13 oktobra 1994. Lasa fitaizana ankizy tsy ampy taona tandindomin-doza (iharan’ny herisetra
isan-karazany na narian’ny olona) ny akany ho fiarovana azy ka 150 no ao ankehitriny. Misy zaza vao teraka hatramin’ny 18 taona. Anofana trano ireo mihoatra ny 18 taona ary iantohana manontolo mandra-pizakany tena raha mbola mianatra (9 amin’ny ovniversite). Iantohana koa raha voavaha ny olany ka mody any amin’ny ray aman-dreniny (130 no isany).